macOS Catalina waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 10.14.7 | Waxaan ka socdaa mac
macOS Catalina waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 10.14.7
Sida noocyada kale ee nidaamyada hawlgalka Apple, macOS Catalina sidoo kale shalay galab ayaa la cusbooneysiiyay. Xaaladdan oo ah nooca ay sii deysay Apple wuxuu hagaajiyaa qaar ka mid ah arrimaha amniga iyo ciladaha la helay Qaabkii hore sidaa had iyo jeer waxaan kugula talineynaa inaad rakibto cusbooneysiintan sida ugu dhaqsaha badan.
Nooca ay soo saartay shirkadda Apple ee macOS Catalina waa 10.15.7 iyo Safari sidoo kale waa lala cusbooneysiiyay. Waa iska cadahay in Apple aysan dhinac udhigi doonin adeegsadayaasha kusugnaa qeybta kahor nidaamka hada shaqeeya ee Mac, waana sababta ay uso bandhigeyso noocaan cusub ee cusbooneysiinta rootiga ay uqaadaneyso nidaamyada cusub.
Sidaan ku dhahno kiiskan, waxay ku saabsan tahay hagaajinta waxqabadka, amniga iyo xasilloonida nidaamka, sidaa darteed ma jiraan astaamo cusub marka la barbar dhigo noocii hore ee shaqeynta. Users kala soo bixi kartaa cusboonaysiinta this ka Xulashada Nidaamka - Cusbooneysiinta Barnaamijka.
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa leh otomaatikada tooska ah ee firfircoon, noocaani horeyba waa loo rakibay, xaalad kasta oo aad si toos ah uga hubin karto qaybtaan kor ku xusan. Noocyada cusub ee macOS marwalba waa soo dhaweynayaan dadka isticmaala iyo inbadan markaad joogtid noocyada ayaa hagaajiya cillad kasta oo weyn oo xagga amniga ah sidii ku dhacday Big Sur dhowr saac ka hor. Waa run inay jiraan isticmaaleyaal diidan inay cusboonaysiiyaan qalabkooda laakiin annaga, sida Apple laftiisa, waxaan kugula talineynaa oggolaansho sida ugu dhakhsaha badan, sidan ayaan uga fogaaneynaa dhibaatooyinka amniga ee suurtagalka ah waxaanan heli doonnaa horumarin ku saabsan howlaha guud ee nidaamka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » MacOS Catalina » macOS Catalina waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 10.14.7
12 × 32 Podcast: IPad Pro wuxuu uqalmaa waxbadan